Farqiga u dhaxeeya lacagta laga qaado musharaxiinta madaxweynaha ee dalalka Afrika iyo Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Farqiga u dhaxeeya lacagta laga qaado musharaxiinta madaxweynaha ee dalalka Afrika iyo...
Farqiga u dhaxeeya lacagta laga qaado musharaxiinta madaxweynaha ee dalalka Afrika iyo Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maalmihii dambe si weyn dalka looga hadal hayaa doorashada madaxweynaha, taasi oo lagu wado in 15-ka bishaan ka dhacdo magaalada Muqdisho.
Doorashada ayaa waxaa isku soo taagay 39 musharax oo is diiwaan-geliyay, halka kuwa kale ay iskaga hareen kadib markii ay soo buuxin waayen shuruudihii looga baahna ee ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha.
Habraaca iyo shuruudaha musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkaan waxaa qayb ka ahaa bixinta lacag gaareysa 40,000 dollar oo la isku diiwaan-gelinayo, waana qarashkii ugu badnaa abid ee ku baxa diiwaan-gelinta musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaa warbixintaan ku eegeyna qaar kamid ah dalalka qaarada Afrika iyo lacagaha musharaxiinta laga qaado, taasi oo marka loo eego midda Soomaaliya ee sanadkaan ay noqoneyso mida ugu badan ee laga qaado musharaxiin u baratameysa xilka madaxweynaha.
Tansania: dalka Tansaaiya oo ah dal dhaca bariga qaaradda afrika, tirada dadkiisuna ay gaarayaan 59.73 milyaan oo qof ayaa waxaa dhowrkii sanaba mar ka dhaca doorasho madaxweyne.Musharixiinta isku soo taagta xilka madaxweynaha dalka Tansania ayaa waxaa laga qaada lacag gaaraysa $1,000 dollar, taasi oo lagu diiwaan-gelinayo musharaxa madaxweynaha dalka Tansaaniya.Dalkaan ayaa kamid ah dalalka ugu yar ee laga qaado lacagaha musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha, waxaa dalkaan hadda madaxweyne ka ah Haweeney lagu magacaabo Samia Suluhu Hassan, taas oo baddashay madaxweynihii ka horeyay kadib markii uu geeriyooday.
Kenya: dalkaan oo deris la ah Soomaaliya ayaa isna kamid ah dalalka qaaradda ku yaallo oo 5-tiii sanaba mar ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha.Musharixiinta xilka madaxwynaha dalka Kenya isku soo taagta ayaa laga qaada lacag gaareysa $10,000 dolar, taas oo ah lacagta diiwaan-gelinta musharixiinta madaxweynaha dalka Kenya.
Burundi: Dalkaan oo kamid ah dalalka ku yaalla qaaradda Afrika, tirada dadkiisuna ay gaarayaan 11.89 milyan oo qof , ayaa dhowrkii sanaba ay mar ka dhacda doorashada madaxweynaha dalkaa.Burundi oo hadda madaxweyne uu ka yahay Évariste Ndayishimiye ayaa marka lagaaro doorashada madaxweynaha, musharixiinta xilkaas isku soo taagta laga qaadaa lacag gaareysa $7,500 dolar, taas oo ah lacagta isdiiwaangelinta musharixiinta.
Ghana: Dalkaan oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika, tirada dadkiisuna ay yihiin 31.07 milyaan oo qof ayaa kamid ah dalalka afrika ee lacagaha ugu badan laga qaado musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynanimada ee dalkaas.Ghana waxaa musharax u tartamaya xilka madaxweynaha laga qaadaya lacag gaareysa $17,00 dolar oo ah lacagta isdiiwaangelinta musharixiinta xilka madaxweynaha daneyneysa.
Marka loo eego dalalka aan kor kusoo xusnay lacagta laga qaaday musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa illaa xad uga badan, waxayna midaan noqoneysa middii ugu badneyd ee abid laga qaado musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya.